Gulf Samachar - Page2of 84 - The Latest News From The Gulf
By gulfsamachar January 15, 2018 January 15, 2018
आफ्नै सेक्स भिडियो सार्वजनिक गरेपछि नायिकालाई वित्यास
जनबोली न्युज डेस्क, काठमाडौं । आफ्नै सेक्स भिडियो सार्वजनिक गरेर चर्चामा आएकी पाकिस्तानकी एक नायिकालाई अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि हंगामा मच्चिएको छ । पाकिस्तानी नायिका मिराले आफ्नै प्रेमी नावेद शहजादसँग सेक्स गरेको भिडियो सार्वजनिक गराएकी थिइन् । अदालतले उनीहरुलाई पक्राउ गरि अदालतमा ल्याउन आदेश दिएको छ । उनलाई अश्लीलता फैलाएको र स्लामिक मुल्य मान्यता […]
भोलिदेखि दुई अर्बभन्दा बढीको आइपिओ खुल्दै
काठमाडौं, माघ १ –नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ नयाँ अवसर तथा लगानीका स्रोतको पहिचान हुँदै गरेको सन्दर्भमा म्युचुअल फण्डमा एकपछि अर्को गर्दै आकर्षण बढ्दै गएको छ । पुँजी बजारमा लगातार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीका सहायक कम्पनीले म्युचुअल फण्डको बिक्री गर्ने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा मंगलबारदेखि दुई महत्वपूर्ण कम्पनीको म्युचुअल फण्डको बिक्री सुरु हुने भएको छ […]
यी हुन्, मृत्युपछि पनि करोडौँ कमाउने टप १० सेलेब्रिटीहरु, सबै भन्दा अगाडि माइकल ज्याक्सन
विश्वका धनि व्यक्तिहरुको रिपोर्ट सहित सूची तयार पर्ने फोर्ब्स म्यागेजिनको हालै सार्वजनिक भएको सूची अनुसार मृत्युपछि पनि सेलेब्रिटीहरुले करोडौँ रुपैयाँ कमाई रहेका छन्। जसमा कयौं ठूला-ठूला सेलिब्रेटीहरुको नाम सामेल छ। जसमा पप स्टार माइकल ज्याक्सन शिर्ष स्थानमा रहेका छन्। फोर्ब्सको सूचिमा एक आश्चर्यजनक नाम पनि समावेश छ। टप १० लिस्टमा अल्बर्ट आईन्स्टाईनको नाम पनि छ। […]
ई-गेट सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुको संख्या २० लाख नाघ्यो
कतार भित्रने तथा बाहिरिने यात्रुहरुको सुविधाको निमित्त हमाद अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको ई-गेट सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुको संख्या सुरुवाती वर्षको तुलनामा दोब्बर बढेको छ।विमानस्थलको तथ्याङ्क अनुसार २०१७ मा कतार भित्रने १०.२८ लाख र बाहिरिने १०.१८ लाख गरी जम्मा २०.४६ लाख बढी यात्रुहरुले सेवा प्रयोग गरेका छन्। विमानस्थलले आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा चाँडै २० ओटा ई-गेट थप्ने […]
जागिर छाडेर वेश्यालय चलाउने प्रहरी दुई युवतीसहित समातिए
काठमाडौँ, १ माघ । काठमाडौँको कालिमाटीमा रेष्टुरेण्टको आवरणमा वेश्यालय चलाउने एक पूर्वप्रहरी दुई युवतीसहित समातिएका छन् । काठमाडौँको कालिमाटीस्थित भ्यू प्वाइन्ट नामक रेष्टुरेन्टको आवरणमा वेश्यालय चलाउँदै आएको खुलासा भएपछि पूर्वप्रहरी भिमबहादुर बिश्वकर्मा पक्राउ परेका हुन्। काठमाडौं इन्जिनियरीड कलेज अगाडि रहेको रेष्टुरेण्टबाट बिश्वकर्मासहित दुई युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । दुई महिलालाई राखेर विकले बेश्यावृत्तिमा लगाउँदै […]
काठमाडौँ — सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई अवकास दिने भएको छ । त्यसका लागि प्याकेज बनाई स्वेच्छिक अवकासको बाटो रोज्न सरकारले ४५ दिने सूचनासमेत जारी गरेको छ । समायोजन प्रक्रियामा जाँदा करिब ११ हजार निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासको बाटो रोज्ने आँकलन सरकारको छ । सामान्य प्रशासनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट […]
हेर्नुहोस, टाइगर जिन्दा हे को गीतमा तेरिया मगर नाच्दा कैट्रीनालाई पनि पछाडी पारिन(भिडियो सहित)
तेरिया मगर नेपालको रुपन्देही जिल्लामा अवस्थित रुद्रपुर गाविस सुनगाभाचोककी वासिन्दा हुन् । उनको पूरा नाम तेरिया फौजा मगर हो । नृत्यकौशलका कारण भारतमा भएको प्रतियोगिता डान्स इन्डिया डान्समा पहिलो स्थान पाएका कारण उनी विश्वसामु चिनिएकी हुन्। उनी भारतीय टेलिभिजन च्यानल कलर्स टिभीबाट प्रशारण हुने वास्तविक कार्यक्रम झलक दिखला जा ९ सिजनको विजेता पनि हुन् । […]
१६८ यात्रु बोकेको विमान दुर्घटना : दुर्घटनापछि कोलाहाल मच्चियो,२० मिनेटपछि मात्र सुरु भयो उद्धारकार्य
एजेन्सी। टर्कीमा १६८ यात्रु सवार विमान रनवेमा दुर्घटना भएको छ । टर्कीको ट्रेब्जोन विमानस्थलमा ल्याण्ड गर्न लागेको विमान दुर्घटना हुँदा चिप्लिएर समुद्रको डिलसम्म पुगेको बिबिसीले जनाएको छ । बिबिसीका अनुसार २ पाइलट र चालकदलका अन्य ४ सदस्यसहित १६८ यात्रु बोकेको विमान ल्याण्ड गर्ने बेला रनवेबाट चिप्लिएको हो । यद्यपि दुर्घटनामा मानवीय षती भने भएन । […]
कश्मीरमा भारतलाई इजरेलले बाटो देखाउँदैछ?
भारतीय जनता पार्टी परम्परागत रूपमा इजरेलसँग नजिकको सुरक्षा सम्बन्ध बनाउन उत्साहित रहँदै आएको छ। सन् २००० को जुन १४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीले इजरेलको भ्रमण गरेका थिए। उनी आफूसँग सबै भारतीय सुरक्षा प्रमुखलाई लिएर गएका थिए जसलाई एउटा अभूतपूर्व कदमको रूपमा हेरिएको थियो। आडवाणी त्यहाँबाट स्वदेश फर्केपछि रूसका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री भारत आए। कश्मीर […]
बाहुबली-२ का यी पाँच सन्देश: जसले तपाइँलाई जीवनभर दिन सक्छ सफलता र अत्यधिक खुसि!
बहुबाली -२ (द कन्क्लुजन) भारतीय सिने नगरिकै सर्वाधिक सफल चलचित्र बन्न पुगेको छ। फिल्ममा देखाईएका कुराहरु तथा नायक नायिकाले गरेको ड्रेसअपले हाम्रो जीवनमा ठुलै प्रभाव परेको पाइन्छ । चाहे त्यो गजनी फिल्ममा अमिर खानले काटेको हेयर कटको कुरा गरौँ या कोरियन चलचित्रको प्रभावबाट चुज पेन्ट लगाउने प्रचलन। चलचित्रमा भएका घटना र दृश्यको फलो गर्दै मानिसहरुले […]